होटल क्वारेन्टाइनमा असुविधा भए होटललाई कारबाही – Sanchar Patrika
होटल क्वारेन्टाइनमा असुविधा भए होटललाई कारबाही
August 23, 2020 128
७ भदौ, काठमाडौँ ।
होटल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष हिराध्वज शाहले होटल क्वारेन्टाइनमा बस्नेलाई सरकारले तोके अनुसारको सेवा सुविधा उपलब्ध नगराए कारबाही गरिने बताएका छन् । महासंघले होटल क्वारेन्टाइनहरुको नियमित अनुगमन गर्ने र सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार सुविधा नदिए सम्बन्धित होटललाई कारबाही गरिने शाहले बताएका हुन् ।
अनुगमनका लागि महासंघले कार्यकारी महासचिव शेरबहादुर थापाको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति समेत गठन गरेको अध्यक्ष शाहले बताए । उक्त समितिले दैनिक रुपमा होटल क्वारेन्टाइनको अनुगमन गर्ने र सरकारले भने अनुसारको खाना, खाजा लगायतको सेवा उपलब्ध नगराएको पाइए कारबाही गरिने बताए । त्यस्तो होटललाई होटल क्वारेन्टाइनको सूचीबाट हटाउन सिफारिस गरिने उनले बताए । सरकारले संक्रमितहरुलाई राख्न आइसोलेसन सेन्टर निर्माण गर्नको लागि होटलको माग गरेकाले बस्ती भन्दा टाढा रहेका पाँचवटा होटल उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा महासंघमा छलफल भइरहेको पनि शाहले बताए ।
सरकारले महासंघ अन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकामा रहेका १ सय १२ वटा होटल सहित कुल २ सय २० वटा होटलहरुहरुलाई होटल क्वारेन्टाइनको रुपमा सूचीकरण गरेको छ । जसमा ३ हजार ५ सय वटा बेड क्षमता रहेको छ । सरकारले विदेशबाट नेपाल आउने व्यक्तिलाई आफ्नै खर्चमा ७ दिन सम्म अनिवार्य होटल क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
Prevनेपालले नाप्यो सगरमाथाको उचाइ, घोषणा गर्न चीनसँग समन्वय हुँदै
Nextके तपाई भाडाको घरमा बस्नुहुन्छ? यदि बस्नुहुन्छ भने ध्यान दिनुहोस् यी ३ कुरा
लकडाउन हटे पनि के–के गर्न पाइँदैन?
श्रीमतीलाई फोनमा ‘मलाई कोरोना भयो म मर्दैछु’ भनेका श्रीमान कोठामा प्रेमीकासँग भेटिएपछि !
काठमाडौं बानेश्वरका एक जनाको को’रोना सं’क्रमणकाबाट मृ’त्यु !
भारतबाट सलह नेपाल छिर्दै, अब अर्को भयावह चुनौती थपिने ! (6243)
देशभर कोरोनाले आतंकमच्चाईरहेका बेला भक्तपुरमा घट्यो अनौठो घटना, स्थानीयवासी परे अचम्म, मच्चियो हल्लीखल्ली ! (5066)
बुटवलमा जब गर्भवती महिलालाई अप्रेसन गर्नु अघि चिकित्सकले कारोना भएको थाहा पाएपछि…डाक्टरले जे गरे त्यसले बनायो सबैलाई चकित (3233)
देशैभरिका घरबेटीका लागि गृह मन्त्रालयले जारि गर्यो सूचना, यदि यस्तो गरेको पाइए हदैसम्मको सजाय हुने ! (2731)
विद्यालय खोल्ने तयारी, मिति नै तोकियो (2676)
१८ साताकी गर्भवती महिलाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएपछि, जङ्गलमा लगेर यसरि गरियो दाहसंस्कार (2660)
भोलि साउन १८ गतेदेखि २२ गतेसम्म लकडाउन गर्ने निर्णय, सवारी साधन पूर्णरुपमा बन्द (2637)
चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरसबिरुद्धको भ्याक्सीन पनि सबै भन्दा पहिले चीनले नै दिने ! (2371)